Unxweme loMzantsi 150m ukusuka kwi-Beach House 2 ukuya kwi-6 Abantu
Indlu eMizan Plage kwicala elingasezantsi, ihlaziywe ngokupheleleyo, indawo etofotofo kwaye ezolileyo. Indawo efanelekileyo i-150m ukusuka eLwandle (iilwandle ezigadiweyo) 50m ukusuka kumsinga kunye nebhulorho, ithandeka kakhulu xa uhamba ekuseni kunye nokutshona kwelanga, i-400m ukusuka kwimarike nakumazantsi eendlela zebhayisikile. Yonke into ikumgama wokuhamba (iivenkile, iiresityu, ukuzonwabisa, njl.). 2 amagumbi okulala, ikhitshi elifakelweyo, ithafa eligqunyiweyo.. Ukukwazi ukupaka imoto ngaphakathi kwendawo ebiyelweyo. Izilwanyana zinokwamkelwa.
I-150m ukusuka elunxwemeni upaka imoto yakho ngaphakathi kwendawo ebiyelweyo kwaye emva koko ungajikeleza ngeenyawo kuphela. Indawo ezolileyo ekufutshane nazo zonke izinto eziluncedo. Indlu encinci yaselwandle ihlaziywe ngokupheleleyo inamagumbi okulala ama-2, i-terrace egqunyiweyo ilungele isidlo sakusasa esincinci kunye nezidlo zangaphandle kunye nazo zonke intuthuzelo efunekayo ngexesha leeholide. Ilinen yebhedi kunye neetawuli zibandakanyiwe kwixabiso lokurenta. Iibhedi ziya kwenziwa xa ufika. Izilwanyana zasekhaya zamkelwa ngovuyo olukhulu.
5.0 · Izimvo eziyi-62
Ulwandle lukufuphi kwi-3 yemizuzu yokuhamba kunye nekhoyo ngoku ekupheleni kwesitrato kunye neendlela zokujikeleza kwelinye icala lesitrato! Ivenkile ethengisa inyama kunye nendawo yokugcina isonka kumaphephandaba ecuba zikufuphi. Ehlotyeni indawo yokubhaka yi-100 m ukusuka endlwini ebusika kufuneka uwele nje ibhulorho ukuze ufumane isonka kunye netshokholethi.
Ifumaneka ngokupheleleyo ukuhlangabezana nokulindelweyo kubahambi esihlala 10 km ukusuka kwirenti kwaye sisebenza kwi-MIZAN.